‘प्यारासाइट’ले ओस्कार जित्दा ट्रम्प किन दु:खी ?- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कोलोराडो — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्ष दक्षिण कोरियाली चलचित्र ‘प्यारासाइट’ ले ओस्कार अवार्ड जितेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार कोलोराडोमा भएको चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘प्यारासाइट’ दक्षिण कोरियाली चलचित्र भएकैले ओस्कार दिइनु गलत भएको बताएका हुन् ।
‘यस वर्षको एकेडेमी(ओस्कार) अवार्ड कति खराब थियो, तपाईँले ध्यान दिनुभयो? र विजेता भयो... दक्षिण कोरियाको एउटा चलचित्र,’ ट्रम्पले भने।
प्यारासाइटलाई अवार्ड दिनु गलत रहेको कारण बताउँदै ट्रम्पले भने, ‘यस्तो के वाइहात हो? दक्षिण कोरियासँगको व्यापारमा हाम्रा थुप्रै समस्या छन्। यस्तो अवस्थामा दक्षिण कोरियाली चलचित्रलाई नै यस वर्षको उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड दिए।’
बोङ जून होको निर्देशन रहेको ‘प्यारासाइट’ चलचित्र ओस्कारमा उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जित्ने पहिलो विदेशी भाषाको चलचित्र हो। यसका साथै ‘प्यारासाइट’ ले उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट मौलिक पटकथाको अवार्ड पनि जित्न सफल भएको थियो।
ट्रम्पले अहिलेका चलचित्रप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा ७० वर्षभन्दा पहिले बनेका अमेरिकी चलचित्रप्रति भने रुचि देखाएका थिए।
‘प्यारासाइट’ राम्रो छ वा छैन भन्नेबारे भने आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँदै ट्रम्पले भने, ‘मलाई लाग्छ यो विदेशी भाषाको उत्कृष्ट चलचित्र हुन सक्थ्यो तर सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नै। यसभन्दा पहिले यस्तो कहिल्यै भएको थियो?’
‘प्यारासाइट’ को अमेरिकी वितरक निअनले राष्ट्रपति ट्रम्पको विवादास्पद अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ। निअनले ट्विटरमा लेखेको छ, ‘बुझ्न सकिने कुरा हो, उनी पढ्न सक्दैनन्।’
Understandable, he can't read.#Parasite #BestPicture #Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP — NEON (@neonrated) February 21, 2020
त्यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू ब्राड पिटको प्रशंसक नभएको पनि बताएका छन्। हलिउड अभिनेता पिटले ओस्कारमा उत्कृष्ट सह–अभिनेताको अवार्ड ग्रहण गर्दा ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रसंग ल्याएका थिए। ‘म ब्राड पिटको ठूलो प्रशंसक कहिल्यै थिइनँ तरउसमा केही बुद्धिमता भने देखिन्छ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ १०:३६
फाल्गुन ९, २०७६ ठाकुरसिंह थारु
बर्दिया — औपचारिक कार्यक्रममा सधैंजसो कालो कोटमा देखिन्छिन् । उनको कार्यकक्ष अगाडिको टेबुलमाथि उपाध्यक्ष लेखिएको नेमप्लेट छ । यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न उनका लागि कम्ती चुनौती झेल्नु परेन । तर, निरन्तरको संघर्ष, त्याग र हिम्मतले हिमाकुमारी थरुनी गेरुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष बनेकी हुन् ।
यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा धेरै खुसी गुमाएकी छन् । अनेकथरी कुराको पछाडि लागेर श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे । समुदायले चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदा मन नपोल्ने कुरै भएन । तर पनि, सधैं आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहिन् । यही संघर्षले उनलाई उपाध्यक्ष बन्ने अवसर दियो । ‘जति नै दुःख र पीडा भए पनि कहिल्यै रोइनँ । जति कुरा काटे पनि पछाडि फर्केर हेरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘घरबाट कुनै सहयोग भएन । श्रीमान्ले पनि छोड्नु भो । पीडैपीडामा संघर्ष गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेकी छु ।’
श्रीमान्बाट सहयोग नपाएकी उनलाई माइती पक्षको सहयोग छ । उनका बुबा योगेश चौधरी ०५६ सालको निर्वाचनमा गोला गाविसको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । माइती छँदै घरमा कांग्रेसका ठूला नेताको जमघट हुन्थ्यो । बैठक हुँदा कुरा सुन्थिन् । बुबाले राजनीति गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिन्थे । तर, विवाहपछि पारिवारिक बन्धनमा बाँधिइन् । जग्गा–जमिन थिएन । काममा जोतिनु पर्थ्यो । भेला–बैठकमा जान रोक लगाइयो । रातबिरात घर पुग्दा गाली खानु र कुटपिट हुनु सामान्य बन्यो । तर, उनले हरेस खाइनन् । सामाजिक सेवामा निरन्तर लागिरहिन् ।
१० कक्षा पास गरेकी उनी महिला स्वयंसेविका बनेपछि राजनीतिक यात्रा गर्न केही सहज भयो । उनी निरन्तर २२ वर्षसम्म स्वयंसेविका भएर काम गरिन् । ‘यसरी स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्दा योसँग गइस् । त्योसँग हिंडिस् भन्ने कुरा गाउँमा हुन्थ्यो । घरबाटै सहयोग नपाएपछि अरुले त भन्ने नै भए,’ उनले विगत खोलिन्, ‘म त्यस्ता नचाहिने कुराको पछाडि लागेको भए आज यो अवस्थामा पुग्ने थिइनँ ।’ १६ वर्षअघि श्रीमान्ले छोड्दा दुई नाबालक छोरा थिए । उनीहरूको पालनपोषणका लागि निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसलगत्तै कांग्रेसको राजनीति गरेको आरोपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीको निसानामा परिन् । दुई छोरा लिएर सदरमुकाम गुलरिया गइन् । त्यहीँ डेरा लिएर छोरा पढाउन थालिन् । मुक्त कमैया परिवारबाट सिलाइकटाइ तालिम पाएकी उनले त्यही पेसा रोजिन् ।
भूमि सुधार कार्यालयले कमैया महिलाका लागि सिलाइकटाइ तालिम चलाएपछि प्रशिक्षक बनिन् । ‘अहिले एउटा छोरा नेपाली सेनामा भर्ना भएको छ । अर्को कामका लागि विदेश आउजाउ गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले गरेको संघर्षबारे भनेर साध्य छैन । तर, लक्ष्यसम्म पुग्न पाएकामा खुसी छु ।’
०६४ सालमा उनी गाउँ फर्किन् । त्यसयता निरन्तर स्थानीयका घरदैलोमा पुगिरहेकी छन् । हाल उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन् । ‘भविष्यमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गर्ने इच्छा छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी र जनता जनार्दनले विश्वास गरे पक्कै त्यो पद पनि टाढा छैन ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:५६